इमेज साप्ताहिक : 2017-09-24
बिजय दशमी– २०१८ को तयारी
कवि कपिलदेव खनाल
यस्तै हुने हो भने
अर्को सालको दसैं बिजया दशमी–२०१८ हुनेछ ।
अहिले त जिनतिन हामी बिजया दशमी २०७४ भनिरहेछौं
तर यस्तै हुने हो भने
अर्को साल हामी बिजया दशमी–२०१८ मनाउने छौं ।
हरेक महिना लुगा किन्नेलाई
दसैंको के मज्जा ?
घाम नपस्ने कोठामा गुजारा गर्ने
जमरा जस्ता पहेला शहरियाहरुलाई
के सुहाउँथ्यो पहेलै जमरा शिरमा !
दक्षिणा कतारबाट आउँछ,
टिकाको चामल इण्डियाबाट आउछ,
अबिर चाइनाबाट आउछ ।
अनि हामी बनाउछौं टिका
दक्षिणको नयाँ नयाँ नोट
अनि मनाउछौं र भन्छौं बडादशैं २०७४
इण्डियाको चालमको टिका
चिनको अबिर र तासका पत्ता !
मासु केरुङ्गबाटै आउनु पर्ने
पिङ्गको लठ्ठा चाइनाबाटै आउनु पर्ने
चङ्ग इण्डियाबाटै ल्याउनु पर्ने
टिका थाप्ने मान्छे कतार मलेसियाबाट आउने पर्ने
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Friday, September 29, 2017 No comments:
हजुरबा जमरा राख्नुहुन्थ्यो,
बाले खसी ल्याउनु हुन्थ्यो,
आमाले मकेरो खोज्नुहुन्थ्यो, लिपपोत गर्नुहुन्थ्यो
मगमग कमेरो वास्ना आउने दसैं हुन्थ्यो ।
यो पाली, यो छोरो दसैं उराठ भन्दै बजारतिर गाएर हिड्छ,
बुहारीलाई भ्याइनभ्याई छ शहरतिरै ।
भखैरै स्थानीय तह चुनाव सकियो,
चुनावसंगै गाउँका सबै खसी बोका सकियो,
बा फोन गरेर भन्नुहुन्छ ः
बोइलरले कसरी दसैं मनाउनु
बट्टारबाट ८\_१० किलो मासु पोको पारेर आईजो
म सोचिरहेछु ः
गाउँ जाने वित्तिकै मनाउने गरी
मलाई कस्ले ठिक्क पार्देला यो सालको दसैं !
(२०७४ असोज ६ गते बसिवियाँलो नुवाकोटद्धारा आयोजित दसैं विशेष कार्यक्रममा वाचन गरिएको रचना)
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Wednesday, September 27, 2017 No comments:
सात जनाको ज्यान गएपछि लाइसेन्स बनाउदै चालक
चालकको को थिए भन्ने विवरण पनि प्रष्टसंग बिबरण बाहिर आएको छैन । तामाङ थरका एक जना चालकको नाम प्रहरीलाई दुर्घटना भएको दिन टिपाइएको थियो । काठमाडौंका विभिन्न चार अस्पतालमा ३५ जना घाइतेको उपचार हुँदा पनि उक्त बसको चालकको कतै पनि उपचार भएको पाइएको छैन ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, September 24, 2017 No comments:
स्थानीय चुनावमा गाउँको खसी बोका सकिएपछि दसैं प्रभावित नुवाकोटमा मनाङको च्याङ्ग्राा, मुल्य ३३ हजार
विदुर । यो वर्ष रसुवागढी नाकाबाट दसैंको लागि ५५ ओटा भेडाच्याङ्ग्रा मात्र आयात भएको छ । तिब्बतमा भेडाच्याङ्ग्राको मूल्य बढेको र उत्पादन भएको च्याङग्रा त्यहीँ खपत हुने भएको कारण आयातमा ठुले गिरावट भएको हो ।
तर, यसपालि नाका प्रवेश गरेको ५५ वटा च्याङ्ग्राा धुञ्चेसम्म पनि नआइपुगेको बताइएको छ । दसैंका लागि हरेक वर्ष रसुवागढी नाकाबाट भेडाच्याङ्ग्रा आयात हुने गरेकोमा यो वर्ष मुस्ताङबाट जिल्ला ल्याएको पाइएको छ । स्थानीय ब्यापारिहरुले केही संख्यामा मुस्ताङ्गबाट ल्याएको भेडा च्याङ्ग्रा नुवाकोट आइपुगेको भएपनि असाध्यै महंगो रहेको बताइएको छ ।
वर्षेनी तिब्बतबाट आउने भेडा च्याङ्ग्राले धान्दै आएको मासुको माग अव स्थानीय स्तरमा खसी बोकाले धान्नुपर्ने भएको छ । तर, दसैंमा आवश्यक पर्ने मात्रामा नुवाकोटमा खसी बोका नभएको बुझिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण गाउँघरमा प्रायः खसी बोका बैशाख÷जेठ महिनामै सकिएकोले अहिले नुवाकोटमा खसी बोकाको अभाव देखिएको छ । चुनाव पछि हुर्केका खसी बोकाको संख्या कम रहेको र कलिलो भएकोले नुवाकोटमा मासुको लागि काठमाडौं वा तराईबाट खसी बोका मगाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
दशैँलाई लक्षित गरी चीनको तिब्बतबाट रसुवागढी हुँदै आयात गरिने भेडाच्याङ्ग्राको संख्यामा तीन वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा भेडाच्याङ्ग्राको भाउ निरन्तर बढ्दै जान थालेपछि आयात निरन्तर ओरालो लागेको व्यावसायीहरुले बताएका छन् ।
गत वर्ष करिब १३ हजार पर्ने भेडाच्याङ्ग्राको मुल्य यो वर्ष २३ हजार पुगेको ब्यापारीहरुले बताएका छन् । यो पालीको दसैंका लागि भेडा च्याङ्ग्रा लिन केरुङ्ग पुगेको नेपाली ब्यपाीहरु अधिकांश मुल्यका कारण त्यसै फर्किका छन् । पोहोरको भन्दा कम तौल देखिएको र एउटै भेडा च्याङ्गमा १० हजार मुल्य वृद्धि भएपछि रित्तै आएको ब्यपारीहरुले बताएका छन् । तिब्बतमा भेडा च्याङ्ग्राको भाउ बढ्नुका साथै भन्सार शुल्कमा पनि वृद्धि भएको छ ।
२०७० सालको दसैंमा उक्त नाकाबाट दुई सय दुई भेडाच्याङ्ग्रा नेपाल भित्रिएको थियो । २०७१ मा एक सय ८०, २०७३ मा दुई सय ५० ओटा भेडाच्याङ्ग्रा रसुवा भित्रिएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ । २०७० साल भन्दा अघि रसुवागढी नाकाबाट पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म भेडाच्याङ्ग्रा दसैंको लागि आयात हुने गरेको थियो । रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको भेडा च्याङ्ग्रा फुलपातीसम्ममा काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको थियो ।
दसैंमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने चटारो, ठुल दल आन्तरिक गृहकार्यमा
विदुर । आगामी मंसिर १० गते हुने संघीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नुवाकोटमा मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र उम्मेदवार छान्ने आन्तरिक वैठकमा केन्द्रित भएका छन् ।
काँग्रेसले उम्मेदवारको नाम सिफारिसका लागि आइतवारबाट औपचारिक छलफल थालेको छ । पुरानो संरचना अनुसारको क्षेत्र नं. १ र ३ को संयुक्त बैठक बसेको खवर प्राप्त भएको छ । उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस नगरेपनि मोटामोटी रुपमा बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । दसैं अगाडी नै अर्को बैठक बस्ने सम्भावना रहेको र उक्त बैंकबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस हुने सम्भावना रहेको काँग्रेस क्षेत्र नं. ३ का सचिव विष्णु चालिसेले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि उम्मेदवार छनोटको लागि छलफलमा जुटिरहेको छ । एमालेलाई प्रदेश र संघ दुवैको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएको छ भने माओवादी केन्द्रले अब प्रदेश उम्मेदवारको विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित गर्ने छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नुवाकोटले १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रिय सचिवालय सदस्य हितवहादुर तामाङ र २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला संयोजक हिरानाथ खतिवडालाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ ।
नुवाकोटमा यस अगाडी ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको थियो भने संघीय संरचना बनेपछि २ वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । माओवादी केन्द्रले जिल्ला इञ्चार्ज बिमला सुबेदीलाइ संघीय संसदका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरको छ ।
संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा बीचमा उम्मेदवार भित्री रुपमा टुंगो लागिसकेको छ । काँग्रेसवाट पूर्व अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महत यसपटक पनि २ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र समेटिएर वनेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने भएका छन् । त्यहा यसपटक पनि महतलाई माओवादी केन्द्रका हितवहादुर तामाङले टक्कर दिने भएका छन् । तामाङ महतसग यस अगाडी पनि दुई पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिसकेका नेता हुन् । झिनो मतान्तरले मात्र पराजित हुदै आएका तामाङ यसपटक भने महतलाई पराजित गरेर दुई पटकको हारको बदला लिने तयारीमा देखिएका छन् । पछिल्लो पाली भएको निर्वाचन क्षेत्र पुन संरचनाका कारण डा. महत कमजोर र हितबहादुर तामाङ बलियो देखिएको अनुमान छ ।
एमालेले भने क्षेत्र नं. १ मा राजेन्द्रप्रकाश लोहनीलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । लोहनी यस अगाडी को नुवाकोट क्षेत्र नम्वर १ बाट पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पराजित गदै सांसद समेत बनिसेकका छन् । तर उहाँको सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यसमा नपर्ने र जनताका बीचमा लामो समयका वीचमा नभिजेका कारण उनलाई अप्ठायारो पर्ने देखिएको छ । नुवाकोटमा एमाले विगतको संसदिय निर्वाचनहरुमा कमजोर देखिएका कारण पनि लोहनीलाई निर्वाचन फलाम चपाउनु सहर हुने नुवाकोटमा चर्चा छ ।
१ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रमा डा. प्रकशरण महतले पनि टिकट दावी गरिरहेका छन् । दाई महतलाई यसपटक समानुपातिकमा राखेर भएपनि आफुलाई टिकट दिए हुने भन्दै उनी टिकटका लागि लविङमा देखिन्छन् । तर पनि डा रामशरणका अगाडी उनको लविङको जोर नचल्ने काँग्रेस भित्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
उता क्षेत्र नम्वर २ मा भने काँग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । एउटा क्षेत्रमा महतले टिकट पाएपछि अर्काे क्षेत्र केसीले पाउने काँग्रेस नुवाकोट भित्र चर्चा छ । तर त्यस क्षेत्रको टिकटका लागि सांसद समेत रहेका बहादुरसिंह लामा तामाङले पनि अडान लिईरहेपछि केसीलाई अप्ठायारो परेको छ । तामाङले अर्जुननरसिंह केसी समानुपातिकमा बसेर आफुलाई टिकट दिनुपर्ने वताईरहेका छन् ।
तामाङले जति दावी गरेपनि अर्के क्षेत्रमा महतले पाएपछि उक्त क्षेत्रमा अर्जुननरसिंह केसीले नै टिकट पाउने एक काँग्रेस नेताले अनुमान गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा माओवादी र एमालेका तर्फवाट भने करिव विवाद रहित उम्मेदवार छन् । एमालेले पूर्व सांसद समेत रहेका महेन्द्रवहादुर पाण्डेलाई २ नम्वर क्षेत्रवाट उठाउने भएको छ । त्यहा माओवादी केन्द्रले भने जिल्ला संयोजक हिरानाथ खतिवडालाई उठाउने भएको छ । जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका विमला सुवेदीले आफु समानुपातिकमा वस्ने बताएपछि खतिवडाका लागि टिकट मिलेको हो ।
माओवादीका खतिवडा पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएका छन् । विदुर नगरपालिका, वेल्कोटगढी नगरपालिका पनि उक्त निर्वाच्न क्षेत्रमा नै पर्ने भएकोले उत्तः क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानिय तह चुनावमा एमालेले यी दुवै नगरपालिका जितेका कारण एमालेमा टिकटका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डेनै लालयित देखिएका हुन् ।
काँग्रेसभित्र आन्तरिक असन्तुलनको रहेकोले काँग्रेसलाई उक्त क्षेत्रमा कमजोर रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यसै बीच, मुख्य ठुला तीन वटै दललाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार कसलाई अघि सार्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । लामो समय पछि हुन लागेको निर्वाचनका कारण सबै पार्टी पुराना कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन जरुरी बनेको छ । जिल्लाबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नेमा युवा पुस्तालाई अघि सार्नुृ पर्ने साझा माग भने सबै पार्टीमा देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै युवालाई टिकट लिनका लागि लविङ्ग सुरु भएको छ ।
काँग्रेस भित्र क्षेत्र नंं २ को २ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि श्रीराम श्रेष्ठको चर्चा सुरु भएको छ । काँग्रेसले महासमिति, महाधिवेशन र जिल्ला कार्य समितिको पदाधिकारीहरुलाई टिकट लिनको लागि प्राथमिकतामा राखेपछि श्रेष्ठको चर्चा सुरु भएको हो । उनको क्षेत्रमा २ जना महाधिवेशन सदस्य र महासमिति सदस्य १ सदस्य रहेकोमा अन्य दुई जनाले उनलाई अगाडी सार्ने भएका छन् । क्षेत्र नं. २ को प्रदेश नंं १ मा श्रीराम श्रेष्ठको सम्भावना बलियो रहेको बताइएको छ ।
उता, माओवादी केन्द्रबाट सोही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभाका लागि नवराज ढुङ्गाना विश्वासको सम्भावना बलियो देखिएको छ । वाइसिएल केन्द्रिय सदस्य समेत रहेको पुराना माओवादी कार्यकता विश्वास प्रचण्डका निकट रहेका छन् ।
संघीय संसदका लागि करिव अनौपचारिक रुपमा तीन वटै दलले उम्मेदवारीको टुंगो नै लगाईसकेका छन् । तर उक्त नामलाई माओवादी केन्द्र बाहेकका दलले सार्वजनिक गरेको छैन । साथै, प्रदेश सभाका लागि भने तीन वटै दलामा आकांक्षी बढी रहेका कारण सबै दललाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन मुश्किल पर्ने देखिएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक हुने भएपछि संघीय संसदमा निर्वाचन लडन चाहने नेताहरुले प्रदेश सभामा आफु अनुकुल सहज हुने, पैसा खर्च गर्न सक्ने नेताहरुलाई टिकट दिलाउन लविङ गरिरहेका छन् । संघीय संसदका लागि यस अगाडी तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा अब दुई वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ ।
स्थानीय चुनावमा गाउँको खसी बोका सकिएपछि दसैं प्रभा...
दसैंमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने चटारो, ठुल दल आन्तरिक...